नयाँ शक्ति भनेर हामीले कसैलाई पदमा वहाल गर्न चाहेका होईनौं: देवेन्द्र पौडेल, नेता एनेकपा माओवादी | ChitwanOnline
Home / अन्तर्वार्ता / नयाँ शक्ति भनेर हामीले कसैलाई पदमा वहाल गर्न चाहेका होईनौं: देवेन्द्र पौडेल, नेता एनेकपा माओवादी	नयाँ शक्ति भनेर हामीले कसैलाई पदमा वहाल गर्न चाहेका होईनौं: देवेन्द्र पौडेल, नेता एनेकपा माओवादी
जनताले प्रचण्ड बाबुरामको ब्यक्तित्वमाथी पनि प्रश्नहरु खडा गरेका छन् । वहाँहरुले केहि नयाँ गर्दा समर्थन गरेजस्तो, पहिलेकै कुराहरुलाई टुङ्ग्याउन प्रयत्न गर्दा मान्छेको अरुचि भएर सेयर बजारको मार्केट घटेजस्तो हामीले सामाजिक संजालहरुमा देख्छौं ।
तपाई केहि समय अगाडि देशका बिभिन्न भूभागहरुमा घुम्नुभयो । के कति कामले घुम्नुभएको थियो ?
संविधान निर्माणको क्रममा चलेको बहस, छलफलको सभासद्हरुले सुझाव लिने भन्ने थियो । म सभासद् नभए पनि जनताको भावना के रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु मेरो उद्देश्य थियो । पार्टीको अवस्था, परिस्थीति र पार्टीका साथीहरुको मनोबिज्ञान के छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु थियो । तेश्रो संविधान बनिसकेपछि हाम्रो पार्टीलाई बैचारीक , राजनैतिक, सांस्कृतिक, आर्थीक सबै हिसावले अर्को नयाँ ठाँउमा पुर्याएर पार्टी पूनर्गठन गर्ने भनेका छौं । त्यसले मुर्तता त लिएको छैन, त्यसका निम्ती के कति संभावनाहरु छन् यीनै कुराहरु बुझ्नका निम्ती म केहि जिल्लाहरु घुमेको हुँ ।
संविधान निर्माण संम्बन्धि के कस्ता सुझावहरु पाउनुभएको थियो ?
खासगरी मिश्रीत प्रतिक्रियाहरु पाईए । तर अधिकांशको सुझाव यो कोर्ष छिटो भन्दा छिटो सकिए हुन्थ्यो भन्ने देखिन्थ्यो । पछिल्लो चरणमा थारुहरुको आन्दोलन भएको ठाउँहरुमा केहि समय पहिले पुगेका थियौं । त्यहाँ जवरजस्ति अन्याय भएको, आफु उत्पीडनमा परेको , न देशले, न कुनै पार्टीले आफ्नो समस्या बुझेका कुराहरु जनजातीहरु, उत्पीडित समुदायले उठाएका थिए । त्यहिबेला खासगरी भेरी कर्णालीतिर केहि हड्तालहरु पनि भएका थिए । उत्पीडित समुदायले हक अधिकारको कुरा कहि न कहि संबोधन भएको संविधान आईदिए हुन्थ्यो भन्ने मनोबिज्ञान हामीले पायौं । त्यसैले पनि पश्चिम मधेसमा मात्रै घुम्न पायौं । बिगतमा जनयुद्धको प्रभाव रहेको रोल्पा अलि शान्त जस्तो अनुभूति देखिन्थ्यो । प्यूठानमा पनि हामीले भेटघाट गर्यौ । पूरानो बामपन्थि जनआधार भएको र केहि सिनियर साथीहरुसँग पनि भेट्ने अवसर त्यहा प्राप्त भयो । अर्को उद्देश्य रोल्पा चाँहि पछिल्लो जनयुद्धको केन्द्र भएको हुदा प्रेरणा पनि लिउ भन्ने पनि थियो । पछिल्लो हरुको केन्द्र रोल्पा र पहिलेका बामबन्थीहरुको केन्द्र प्यूठान भएकोले ती ठाँउहरुको भ्रमण उपलब्धिमुलक रह्यो ।
तपाईले पार्टीको र पार्टी कार्यकर्ताको अवस्था बुझ्न पनि भन्नुभयो, पार्टीको अबस्था बुझ्न हो की आफ्नै गुटको बिस्तार गर्ने योजना हो ?
म आफ्नो व्यक्तिगत रुपमा घुम्न डुल्न गएको होइन । त्यसका लागि त्यो नयाँ ठाउँ पनि होइन । धेरै चोटी हिडेको ठाउँ हो । त्यसैले घुम्ने उद्देश्य नभएर पार्टीको अवस्था स्थिति बुझ्न गएको हो । यहाँले उठाउनु भो, केही चर्चा गर्नै पर्ने भयो । नेपाली राजनीतिमा अब नयाँ शक्ति जरुरी छ । त्यसबारे पनि साइक्लोजि बुझौं, पार्टी पंक्तिलाई छोडेर होइन, त्यसलाई लिएर त्यसैको जगमा सोच्ने तरिका नया , काम गर्ने तरिका , शैली सबैलाई बदलेर नयाँ मोडेलको पार्टी वा नया शक्ति आवश्यक छ, त्यसका निम्ति पनि के कस्तो सम्भावना छ भन्ने भित्री कुरा थियो, त्यस विषयमा पनि साथीहरुसँग हामीले अन्तरक्रिया ग¥यौं । अधिकांशको सुझाव टुटफुट होइन, फुटेर समस्या हल हुँदैन , भईरहेको पार्टीलाई नै यसको शैली र तरिकामा केही परिवर्तन गरेर अलिकति ध्रुबीकरणतिर जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा बढी पाइयो ।
तपाईको पार्टीका कार्यकर्ताहरुको सुझाव कस्तो आयो नि ?
नेतृत्वहरुले पार्टी बिघटन भयो, माओवादी सिद्धिदै छ भनेर बोल्नु सैदान्तिक, बैचारीक र ब्यबहारीक हिसावले पनि नैतिक प्रश्न नै होईन । माओवादी आन्दोलन समकालिन आन्दोलनको आफैमा नयाँ शक्ति थियो र हो । त्यसले पुराना सोच्ने तरिका परिवर्तन गरेर जनतालाई उत्प्रेरित गरेको हो । करीव २ दशक पछि देशको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक चरित्रमा फेरबदल आएको छ । जनताले फरक प्रकारको मानसिकता बनाइ सकेका छन् । खासगरी राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको, आर्थिक संबृद्धि सहितको समाजवादी क्रान्ति, समाजवादी परिवर्तन, फरक प्रकारको सांस्कृतिक रुपको संप्रेषण र त्यो प्रकारको परिवर्तनको प्रत्याभूति हुने किसिमको पार्टीले र राजनितीक प्रशिक्षण चाहिएको छ । परिणाममुखी काम र बिषय संबोधन गर्नैे पार्टी जनताले यतिबेला चाहेको पाउदछौं ।
नेताहरुलाइ कस्तो सुझाव दिए जनता कार्यकर्ताले ?
यो सेयर बजारको सुचाङ्क जस्तो छ । जनताले प्रचण्ड बाबुरामको ब्यक्तित्वमाथी पनि प्रश्नहरु खडा गरेका छन् । वहाँहरुले केहि नयाँ गर्दा समर्थन गरेजस्तो, पहिलेकै कुराहरुलाई टुङ्ग्याउन प्रयत्न गर्दा मान्छेको अरुचि भएर सेयर बजारको मार्केट घटेजस्तो हामीले सामाजिक संजालहरुमा देख्छौं । अरु पार्टीका नेताहरु जस्तै कांग्रेस एमालेका नेताहरुको पनि तौल घटेको छ । कहिलेकाहि गोबिन्द के सि को पनि सकारात्मक चित्रण हुन्छ । कहिलेकाहि त्यस्ता प्रकारका सामाजिक ब्यक्तित्वहरुको पनि नकारात्मक चित्रण हुन्छ । यसले के देखाउदछ भने केहि न केहि पछिल्लो प्लस टु पुस्ता र पछिल्लो पुस्ताले नयाँ चिजको खोजि गरेको छ । त्यसको आबश्यकता हामीले पनि महसुस गरेकै कुरा हो ।
पछिल्लो पुस्ताले खोजेको नयाँ चिज दिन अहिलेका शिर्ष नेताहरु वा दोश्रो तहका तपाइ जस्ता नेताहरु सक्षम छन् त ?
एक्लै संम्भव छैन । जस्तो उदाहरणका लागि संविधान बनाउने छलफल वहसहरु, समस्याहरु हल गर्ने कुराको प्रसंगलाई जोडेर हेर्दा पनि ठ्याक्कै कसैको कमाण्ड कन्ट्रोलमा रहेको स्थिति छैन । फलनाले भनेपछि मान्नुपर्छ भन्ने जस्तो स्थापित भएको ब्यक्तित्व हामीले प्राप्त गरिसकेका छैनौं । अली बढी मान्छेहरुले केहि गर्न सक्ने सम्भावना भएका व्यक्तिको रुपमा बाबुराम भट्टराईलाई चित्रण गरेको हामी पाउदछौं । यो व्यक्तिगत रुपमा हामी नजिक वा टाढा भएकोले भनेको होईन । पहिलेका प्रधानमन्त्रीहरु वा पहिलेका नेतृत्वहरु मध्ये अहिले पावरको हिसावले हेर्दा फष्ट पार्टी त्यसको पनि सभापतिको नाताले सुशिल कोईराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ वहाँको भन्दा अलि बढी चर्चा बाबुराम भट्टराईको हुने गर्दछ । तर बाबुरामजी ले आफु एक्लै यहाँले भनेको कुराको संबोधन गर्न कठीन हुन्छ । राजनीतिक आर्थिक, साँस्कृतिक सबै हिसावले यो टीमले गर्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति जनतालाई दिलाउनको निम्ती एउटा त्यस्तो प्रकारको टीमको संयोजन कहि न कहि , कुनै न कुनै रुपले ईतिहासमा भयो भने त्यसमा अलिकति भए मध्येका समकालीन मध्ये जनताको आशा बाबुराम भट्टराईमा भएको पनि हामी फिल्डमा हिड्दा पायौं ।
नारायणकाजीको टीमबाट एकतामा आएको एउटा टीमले त एनेकपा माओवादी बिघटन भैसकेको कुरा अगाडि ल्यायो नि , तपाईले भन्ने गरेको कुरा र वहाँहरुको कुरामा के फरक छ ?
हामीले धेरै पहिले देखिनै संगठनात्मक प्रणाली र त्यसको साथ साथै नेतृत्व प्रणालीको बारेमा पनि वहस चलाउदै आएका छौं । यो बारेमा संबन्धित साथीहरुसँग पनि मेरो कुराकानी भयो । अरु साथीहरुसँग पनि छलफल भयो । वहाँहरुको उद्देश्य आदी ईत्यादिका बारेमा पनि क्रिया प्रतिक्रियाहरु भएका छन् र अव हामी सबैसँग छलफलमै छौ । नेपालका बामपन्थी बेसका पार्टीहरु प्राय सबैसँग बिभिन्न तहमा अनौपचारीक औपचारीक छलफलहरुमा नै छौं यतिबेला । जहाँसम्म वहाँहरुको वहसको कुरा छ त्यो करिव करिव सोच्ने तरीकामा एकठाँउमा पुग्ने संकेतहरु देखा पर्दछन् तर पृष्ठभूमि चाँहि अलिकती फरक छ । नेतृत्वको बारेमा, नेतृत्वको संगठनात्मक प्रणालीको बारेमा जे कुरा हामीले उठादै आएका छौ , त्यहाँ वहाँहरु अझै पुगिसक्नुभएको छैन । तैपनि वहाँहरुसँग छलफलहरु चलिरहेको छ । आआफै हामी जुन पृष्ठभूमिबाट यो स्थानमा आएका छौं त्यसैलाई मात्र चलाउन खोज्दाखेरी गुट उपगुटतिरै जान्छ, त्यसो नगरौं । अलिकती भिन्न मत र फरक खालका शैली भएका साथीहरुसँग पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने गरेर पार्टी पूर्ननिर्माणको नयाँ सिराबाट सोचौं भन्ने हाम्रो कुरा हो । हामीले चाहेको पनि त्यहि हो । कुनै गुट बनाउन चाहेको पनि होईन, कुनै नयाँ शक्ति भनेर कसैलाई पदमा वहाल गर्न पनि हामीले चाहेका होईनौं । नेपालको बामपन्थि, परिवर्तनकारी देशभतm आन्दोलनलाई नयाँ शिराबाट पूनगठन नगर्ने हो भने देशले नयाँ गति प्राप्त गर्न सक्दैन । यो बहसमा वहाँहरु पनि आकर्षित भएर जुन बहस शुरु गर्न खोज्नुभएको छ त्यसलाई अहिले भएको वहालवाला पार्टीको अनुसाशनको हिसावले त नकारात्मक भन्नु पर्दछ तर फेरी वहसलाई खुल्ला गरेर त्यसलाई संश्लेषित गरेर अगाडि बढ्ने कुरा फेरी सकारात्मक ठाउँमा पुगेको पनि हामीले बुझेका छौं ।
tweet Previous: वैद्य र विप्लवले घाइतेको मन दुखाए
Next: जनकको काठमाडौं यात्रा